Homeसमाचारसन्तोष दाई जस्तो श्रीमान पाउन भाग्यमा हुनुपर्छ ! प्रमिलालाई भेटे भने कपालमा समाएर झा*पड हान्थे भन्दै हिमा आ’क्रोशित (हेर्नुस् भिडियो)
January 16, 2020 Spnews समाचार Comments Off on सन्तोष दाई जस्तो श्रीमान पाउन भाग्यमा हुनुपर्छ ! प्रमिलालाई भेटे भने कपालमा समाएर झा*पड हान्थे भन्दै हिमा आ’क्रोशित (हेर्नुस् भिडियो)
गत मंसिर २४ गते माईत जान्छु भनेर हिड्नु भएकी प्रमिला परिवारको सम्पर्कमा नआएपछी उनका श्रीमान सन्तोष सुनारले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेका थिए । विदेशमा रहेका श्रीमानसँग माईत जाने अघिल्लो दिनसम्म पनि राम्रो कुराकानी भएको र त्यसपछी फोन सम्पर्क समेत हुन नसकेको प्रमिलाका श्रीमान सन्तोष सुनारले बताएका थिए ।
करिब सात लाख रुपैयाँ, गरगहना, नागरिकता, चेक बुक समेत बोकेर हिडेकी प्रमिलालाई खोजिदिन आग्रह गरेका उनका श्रीमान सन्तोष सुनारले अन्तत: मिडियाको सहयोगमा फेला पारे । सुरेश परियार नाम गरेका व्यक्तिसँग गएकी उनलाई सन्तोषले देख्दा ढले । यस घटनालाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् ।
चितवनको उक्त घटनाको बारेमा श्रीमानबाट अपहेलित हिमा श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राखेकी छिन् । हिमाले सबै युवा मात्र खराब नहुने भन्दै केहि महिलाका कारण पनि समाजमा श्रीमान पिडित हुने गरेको बताएकी छिन् । उनले पिडित सन्तोषले न्याय पाउनु पर्ने र कुनै छोरी मान्छेको कारण घरबार बिग्रिन्छ भने त्यस्ता महिलालाई थ’प्पड हान्नेछु भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेकी छिन् । हेर्नुस् तलको भिडियो :
दु:खद खबर ! युएईको आबुधाबीमा नेपाली कामदार बोकेको गाडी दु’र्घट्ना हुँदा ५ जनाको मृ’त्यु